Saldhigii Militeri ee Turkiga uu ka Furanayay Dalka Soomaaliya oo la soo Gaba-gabeeyay - Hablaha Media Network
Saldhigii Militeri ee Turkiga uu ka Furanayay Dalka Soomaaliya oo la soo Gaba-gabeeyay
HMN:- Saldhigii militeri ee Turkiga uu ka dhisanayay magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in la soo gaba gabeeyay lana soo gaarsiiyay qalabkii loogu talagalay in xaruntaasi lagu maamulo.
Xaruntan millateri ayaa noqon doonta goob lagu tababaro ciidamada Dowladda Federalka ee Soomaaliya, waxaana goobtani dhawaan la keeni doonaa Saraakiil u dhalatay dalka Turkiga, kuwaasi oo ciidamada Soomaaliya ka caawin doona tababarada heerkooda sareeya, si ciidanka xooga dalka Soomaaliya ay ugu guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Ururka Al Shabaab.
Qaramada Midoobay ayaa Dowladda Turkiga u ogolaatay in gudaha dalka Soomaaliya ay ka sameysan karto Saldhigaan Millateri ee lagu tababaraayo ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, iyadoo tani banaanka ay soo dhigeyso sida Dowladda Turkiga ay kaga go’an tahay muujinta taageerada Somaliya.
Saldhigan millateri ee Turkiga uu Soomaaliya ka dhistay ayaa waxaa dhawaan imaan doona Saraakiil Turki ah oo tiradooda ay gaareyso 200 oo Saraakiil ah, waxaana wajiga koowaad xaruntani lagu tababari doonaa Askar gaareysa 10,500 oo Soomaali ah.
Turkiga ayaa Soomaaliya hada ka caawiya dhanka ciidamada Millateriga, hadii ay tahay tababarida Saraakiisha ciidanka iyo dhaqaale siinta Hay’adaha ammaanka dowladda Federalka Somaliya.